Myanmar to Provide Electricity to Myawaddy by Month’s End | Myanmar Business Today
Home Business Local Myanmar to Provide Electricity to Myawaddy by Month’s End
Myanmar to Provide Electricity to Myawaddy by Month’s End
Starting from the end of this month, the government of Myanmar will provide electricity to Myawaddy Township, which has been purchasing power from Thailand.
The border township purchases power from the 22 KV Thai power grid and distributes electricity to residents using 45 public transformers and 76 private transformers.
“The national power grid reached Myawaddy in March 2019. We will replace the existing public transformers and an additional 20 transformers with 11 KV transformers,” said U Khin Maung Win, Deputy Minister of Electricity and Energy.
A unit of electricity purchased from Thailand costs 4.20 baht. The price was raised to6baht per unit in May following reports that the government would provide electricity to the township through the national power grid, said U Sein Bo,amember of the House of Representatives.
“Myawaddy City uses over4million units per month at the cost of over 14 million baht, which is around K724 million,” said the MP.
The Ministry of Electricity and Energy is trying to distribute electricity while replacing old transformers as part of the National Electrification Plan (NEP) targeting 100 percent electrification by 2030.
ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဝယ်သုံးနေရသည့် မြဝတီမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို ယခုနှစ်ကုန်မှစတင်ပြီး နိုင်ငံတော် ဓါတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဝယ်သုံးနေရသည့် မြဝတီမြို့နယ်တစ်ခုလုံးအတွက် ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်မှစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်အားစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းဝေးတွင် အဆိုပါကိစ္စကို ထည့်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြဝတီမြို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၂၂ KV ဓါတ်အားလိုင်းကို ရယူကာ အများပြည်သူသုံး Transformer များ ၄၅ လုံးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် Transformer ၇၆ လုံးနှင့် ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူး အသုံးပြုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံတော်ရဲ့ဓါတ်အား စနစ်နဲ့ မြဝတီကို ၂၀၁၉ မတ်လမှာ စတင်ရောက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဓါတ်အား စနစ်က ၁၁ KV ဓါတ်အား စနစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၂၂ KV Transformer ၄၅ လုံးနဲ့ နောက်ထပ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး ၂၈ လုံးကိုလည်း နိုင်ငံတော် အစီအစဉ်နဲ့ လဲလှယ်တပ်ဆင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အသုံးပြုရာတွင် တစ်ယူနစ်လျှင် ၄ ဘတ် ပြား ၂၀ ပေးရသည်။ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမှ စတင်ပေးမည်ဆိုသည့် သတင်းများထွက်လာပြီးနောက် ၂၀၁၉ မေလမှ စတင်ကာ လုပ်ငန်းသုံး(ဓာတ်အား)ဟုဆိုပြီး လက်ရှိတွင် တစ်ယူနစ်ကို ၆ ဘတ်အထိပေးနေရကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဗိုလ်က ထောက်ပြသည်။
“ မြဝတီမြို့မှာ တစ်လကို ယူနစ်လေးသန်းကျော် သုံးစွဲနေပါတယ်။ တစ်လကို ဘတ် ၁၄ သန်းကျော် မြန်မာငွေ ဆိုရင် သန်းပေါင်း ၇၂၄ သန်းလောက် ထိုင်းနိုင်ငံကို ပေးချေနေရပါတယ်” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဗိုလ်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် Transformer များ ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းအပြင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းများကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိနေကြောင်း ထိုကဲ့သို့ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ပြည်နယ်အစိုးရ ရန်ပုံငွေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောသည်။
ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိစေရန် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Previous articleThird Big Bad Wolf Sale in Myanmar Slated for January
Next articleIn Macao, China SeesaModel foraRebellious Hong Kong